शिशुको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा तनाव, दोषी को हुन् ? - Sutra News
शिशुको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा तनाव, दोषी को हुन् ?
बाँके- बाँकेको भेरी अस्पतालमा यही भदौ ९ गते भएको घटनामा स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाही देखिएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाललाई सोहीअनुसारको प्रतिवेदन बुझाएको छ । भेरी अस्पतालमा सुत्केरी भएकी बाँके सिमलघारीकी चन्द्रा विकको शिशुको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा तनाव भएको थियो ।
शव बुझेर अन्तिम दाह संस्कार गर्ने क्रममा मृतक शिशुको दुवै हातमा दुई आमाको ट्याग लागेको देखिएको थियो । सो घटनामा एउटा हातमा चन्द्रा र अर्को हातमा गीता थारुको ट्याग देखिएपछि उनीहरुले शव भेरी अस्पतालमा मै फर्काएर आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यसपछि घटनाबारे छानबिन गर्न समिति बनाउने, शिशुको डिएनए परीक्षण गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएपछि पीडितका आफन्तले सहमतिमा आन्दोलन रोकेका थिए ।
छानबिन समितिले स्वास्थ्यकर्मीले लापरवाही गरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलाललाई बुझाउँदै यस्ता गल्ती नदोहोर्‍याउन अस्पताल प्रशासन तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सचेत बनाएको छ ।
एनआइसीयूमा एउटा बिरामी बच्चाका साथ एउटा स्वास्थ्यकर्मी खटाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । समितिले बिरामीलाई गर्नुपर्ने व्यवहार स्वास्थ्यकर्मीबाट हुन नसकेको भन्दै त्यसलाई सुधार्न पनि भनेको समितिका सदस्य वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
बालरोग विशेषज्ञ डा.रोमा बोहराको नेतृत्वमा छानबिन समितिले दुई हप्ता लगाएर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रकाशित :भाद्र २८, २०७८ सोमवार - २१:१८:३०
# भेरी अस्पताल
प्रदेश १ ले माग्यो २५ स्टाफ नर्स, ५० प्रतिशत जोखिम भत्ताको सुविधा पनि
फोक्सो र मुटुका बिरामीले पाए ६ लाख
डायलाइसिस मेसिन पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन
बिहान उठेर यस्तो गर्नुहोस्
स्वस्थ्य जीवनशैली अपनाउन के गर्ने, के नगर्ने ?
मुला खानुका फाइदै फाइदा